2 Gang WIFI Wall Molded Socket Outlet SPY Hidden Camera, ndekọ 70hrs, njikere 100hrs (SPY220) | Ngwọta OMG
Zoro Ezo Ezobe Ezobe: Obere na nke dị arọ, Nkọwapụta kọmpat; Kwado kaadị TF ruo 32GB (Ọ bụghị gụnyere); Ịdekọ ndekọ ma na-agbanye n'otu oge ahụ, na-akwado ndekọ vidiyo.
Wi-Fi igwefoto, dị mfe iji: (Dị mkpa: Biko tinye Cards TF gị tupu i jiri ya !!!) Igwefoto a zoro ezo nwere WiFi: Ngwá ngwugwu HiSilicon kasị ọhụrụ wetara njikọ WIFI dị ọcha. Nkwado Obodo na Remote jikọọ, WiFi anya banyere 10m-20m, Nchịkọta mkparịta ụka iji kpuchido nzuzo gị. Atụmatụ: nkwenye nke njikọ dịpụrụ adịpụ bụ hụ na ekwentị nwere ike ịnweta Ịntanetị: WiFi ma ọ bụ netwọk ekwentị mkpanaaka.
Nchọpụta Motion: Mgbe achọpụtare, igwefoto ga-amalite ndekọ na akpaghị aka. Na ngwa-oge Video Recordings, obere Ngwaọrụ a ga-eji ikwesị ntụkwasị obi na-edekọ ihe ị na-emeghị n'ememme na ezigbo oge na nke ọ bụla video faịlụ n'ogologo bụ1 minute.Support ezigbo oge vidiyo.
irè: Mkpebi vidiyo: Ezigbo HD 1280x720P, Weta foto dị elu na nkọwa foto. Na batrị lithium XAUMMN 10,000, mpempe vidiyo ntanetị na 15. Ijikọ na ekwentị mkpanaaka / mbadamba / PC ozugbo site na ịchọ igwefoto WiFi mgbaàmà. Ị nwere ike ile vidiyo site na igwefoto na oge. Ọ dịghị mkpa WiFi rawụta iji kesaa.
(1) Nyochaa ma chekwaa ebe dịka ime ụlọ ihi ụra, ụlọ, ụlọ ezinaụlọ, nurseries, garages, ụlọ ndị ọbịa, na ndị ọzọ.
(2) Igwefoto Nanny, elele anụ ụlọ ma ọ bụ iji jide n'aka na ndị ikwu gị meworo okenye nwere nchebe na ahụike.
(3) Igwefoto chebe ụlọ gị site na igbochi ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi.
Ihe kachasị ọhụrụ Hisilicon chip wireless solution na-eweta njikọ WIFI n'enweghị nsogbu.
Igwe WiFi nke igwefoto a nke oma bu banyere 30m, na-ekwe ka i tinye igwefoto gi na uche.
Mkpebi vidiyo: Ezigbo HD 1280x720P, Weta foto dị elu na nkọwa foto
Batrị lithium mAh nke 10,000 mAh nke na-adịgide adịgide ruo oge 15.
MAX kwadoro kaadị 32GB SD.
Obere ntakịrị na olu, n'ihi ya ị nwere ike zoo ya n'ezoghi ya. Office, njem, ụlọ ahịa, nchekwa ụlọ maka ọdịiche dị iche iche (ụmụ, anu ulo, onye na-elekọta ụmụaka, ndị agadi).
A na-eme ka mkpọchi mkpọchi ghara idegharị faịlụ kachasị na nke kachasị ọhụrụ.
Nchọpụta Motion: Mgbe achọpụtare igwegharị, igwefoto ga-amalite ndekọ na akpaghị aka.
Oge na-edozi anya na oge mmiri.
Ejiri ngwa 2.0 na-agba ọsọ ngwa ngwa ahụ, na-ebu ngwa ngwa, na-ewe oge dị mkpirikpi.
Site na ike mkpanaka, nkwụnye iji kwụọ ụgwọ.
Atụmatụ na-enye ọkụ: N'ihi na nke a bụ igwefoto button, biko egbula igwe ma chebe ya.
Jikọọ Igwefoto: Banyere elele vidio ahụ, ọ nwere ụzọ 2: otu bụ nlele site na jikọọ WIFI. nke ọzọ bụ ogologo nlele anya.
Mfe ngwa ngwa APP, na-achịkwa mfe, dị mfe iji.
Mkpebi vidiyo: Ezigbo HD 1280x720P, Weta foto dị elu na nkọwa foto.
nkwado edekọ ma na-akwụ ụgwọ n'otu oge ahụ,
nkwado aka ndekọ vidiyo,
nkwado 32GB Micro TF Card na Max (Agaghi etinye ya)
Nkwado Obodo na Ime jikọọ, WiFi dị anya banyere 30m, Nchịkwa mkparịta ụka iji kpuchido nzuzo gị.
Atụmatụ: nkwekọrịta nke njikọ dịpụrụ adịpụ bụ hụ na ekwentị nwere ike ịnweta Ịntanetị: WiFi ma ọ bụ netwọk ekwentị mkpanaaka.
Nchọpụta Motion: Mgbe achọpụtare, igwefoto ga-amalite ndekọ na akpaghị aka. Na ngwa-oge Video Recordings, nke a Obere Ngwa ga-ikwesị ntụkwasị obi na-edekọ gị uninvited ọbịa si eme ihe n'ezie na oge ọ bụla video faịlụ ogologo bụ1 nkeji. Kwado ndekọ vidiyo oge.
Mkpebi vidiyo: Ezi HD 1280x720P,
Batrị Lithium: 10,000 mAh
Ogbugbe Mgba: 90 Ogo
Ndekọ vidiyo na-akwado: ruo 15 awa.
Ijikọ na ekwentị mkpanaaka / mbadamba / PC ozugbo site na ịchọ igwefoto WiFi mgbaàmà. Ị nwere ike ile vidiyo site na igwefoto na oge.
Ọ dịghị mkpa WiFi rawụta iji kesaa.
Nzuzo 3334 2 Echiche Taa